Students can get meals at these school sites, Tuesday, March 17- 27, 10 a.m. - 2 p.m. Click on the map for a closer view.
Dugsiyada Dadweynaha ee Minneapolis ayaa waxay siin doona ardayda cunno inta ay iskuulada u xiran yihiin cudurka fayraska ee loo yaqaano COVID-19. Cunnooyinkan waxaa loogu talagalay in loogu beddelo ardayda adeegyada cuntada ay ardaydu sida caadiga ah u heli jireen markii ay dugsigooda joogeen.
Cuntooyinkaan ayaa lagu siin doonaa ardayda dhowr meelood oo dugsi oo ku yaal magaalada oo dhan ka mid ah (eeg liiska hoose).Cuntada waxaa laga bixin doonaa dusha basaska ee iskuulka ay ardaydu dhigteen baarkinadooda; Dhismooyinka iskuuladu way xirnaan doonaan waqtiyadaas.
Adeegyada cunno qaadashada waxay billaaban doontaa Maalinta Talaadada, Bisha Maarso 17eeda waxayna sii socon doontaa ilaa iyo maalinta Isniinta iyo Jimcaha saacadu markey tahay 10-ka ilaa 2-da duhurkii iyadoo iskuulada ay u xiran yihiin fayraska COVID-19.
1. Ma jiraan wax kharash ah oo iiga baxaaya cuntadaan?
Wax kharash ah oo ku baxa adeeggan cunnada ma jiri doono.
2. Ma qaadan karaa wax ka badan hal qado haddii aan carruur badan ku haysto guriga?
Ayadoo la raacayo qawaaniinta federaalka, carruurtu waa inay joogaan oo ay helaan cunno.
3. Si aan u helo cuntada miyaan u baahanahay in aan caddeeyo in cunugaygu yahay MPS arday?
Wax aqoonsi ama waraaqo looma baahna. Cunnooyin ayaa heli kara cunug kasta oo degan magaalada Minneapolis, oo ay ku jiraan kuwa dhigta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo iskuulada kale.
4. Miyaan u qaadi karaa cuntada dadka waaweyn ee qoyskayga mise cuntadaan waxaa loogu talo galay ardayda oo kaliya?
Maya, cuntooyinka waxaa loogu talagalay carruurta da'da iskuulka iyo dhalinyarada 18 sano iyo ka yar. (Cov menyuam txhais tias tus neeg muaj 18 xyoo thiab qis dua thiab tus neeg 18 xyoo rov saum uas qhia tau tias yeej ntxim tau txais kev kawm ntawv pabcuam los ntawm lub Minnesota Department of Education.)
5. Miyaan kala dooran karaa cunnooyinka?
Maya, laakiin laba cunto oo qabow ayaa la siin doonaa qof kasta oo jira da'da 18 jir ah ama kayar.
6. Cunnooyinkaan ma heli doonaan inta lagu jiro doboyaaqada todobaadka?
Maya, ugu yaraan ma aha marka hore, laakiin MPS waxay fiirineysaa sida barnaamijka cuntada loo ballaarin karo dhammaadka usbuuca, toddobaadyada waxayna cusboonaysiin doontaa qoysaska marka tan la go'aamiyo. Si kastaba ha noqotee, xirmooyin cunto oo dheeraad ah ayaa la bixin doonaa iyada oo lala kaashanayo Sheekada Sheridan The Sheridan Story ee lagu bixin doono goobaha cuntada lagu qaybiyo.
7. Halkeen ka heli karaa macluumaad nafaqo oo ku saabsan cuntooyinkan?
Fadlan booqo websaydhka Culinary and Wellness Services website wixii faahfaahin ah iyo macluumaad dheeraad ah.
8. Maxay yihiin ilaha kale ee cunnada ee jira?
Magaalada Minneapolis waxay leedahay khariidad food shelf locations oo ku saabsan goobaha cuntada lagu diyaariyo ee magaalada oo dhan.
Goobaha Cuntada lagu Qaybinaayo
Goobaha hoos ku taxan ayaa qadada lagu qaybinaaya magaalada oo dhan.